आज पहिलो राष्ट्रिय वृक्षरोपण दिवस मनाइँदै,को कहाँ सहभागी हुने ? हेर्नुहोस् यो तालिका «
आज पहिलो राष्ट्रिय वृक्षरोपण दिवस मनाइँदै,को कहाँ सहभागी हुने ? हेर्नुहोस् यो तालिका
प्रकाशित मिति : 29 June, 2019 7:55 am
आज पहिलो राष्ट्रिय वृक्षरोपण दिवस मनाइँदै छ । सरकारले यसै वर्ष असार १४ गतेलाई राष्ट्रिय वृक्षरोपण दिवसको रुपमा मनाउने निर्णय गरेको थियो ।
दिवसको अवसरमा काठमाडौं उपत्यकासहित देशभर वृक्षरोपण कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ । काठमाडौं उपत्यकाको हकमा कोटेश्वर-कलंकी सडकखण्डमा फलफूलका बिरुवा रोपिँदै छ । कोटेश्वर क्षेत्रको वृक्षरोपण कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयं सहभागी हुनेकार्यक्रम छ ।